Fingqa ukuthi yiziphi izimo zokufaka ze-heat exchanger
Ake sibheke ukuthi kungani umshiseli wokushisa enza okubi? Lapho okokusebenza kusebenza, indawo akuyo ingesinye sezizathu zokukhohliswa. Ngakho-ke, ake sibheke izinhlobo zokungcola okuvamile? Izishintshisi zokushisa komoya zivame ukusetshenziselwa ukushisa okuphezulu kanye neflue ethize ga ...
Inkampani ethandekayo bonke abasebenzi nezivakashi ezihloniphekile: Sanibonani ntambama nonke! Ngemuva kweminyaka eyishumi yokulola nokukhula, i-Yuda ishintsha ukushisa isuka edolobheni laseWuxi iye emhlabeni. Uma ubheka emuva ekukhuleni kweminyaka eyishumi, imiphumela okunzima ukuyithola, abaphathi benkampani nabasebenzi basebenza ngokubambisana ...
Siyakuhalalisela ngemfudumalo iWuxi Yuda Heat Exchanger Co., Ltd. ngeminyaka eyi-10 yasungulwa
UDisemba 31, 2016, eMashan Sunshine Hotel ebibanjelwe eWuxi Yuda ukushisa ukushisa iminyaka eyishumi. Abasebenzi abayi-158 bakwaJuda kanye nabaholi bezinkampani bahlangane ndawonye ukuzohalalisela isikhumbuzo seminyaka eyishumi seWuxi Yuda heat exchanger. Umphathi Jikelele wenkampani, uMnuz Guan Chuntao ukhumbule uWuxi Yu Da f ...